अभिनेत्री भास्करको कुमारी मै बच्चा लिने निर्णयले हंगामा, अब बिहे चै कसले गर्छ प्रश्नले घोच्यो !
गृहपृष्ठ » मनोरञ्जन » अभिनेत्री भास्करको कुमारी मै बच्चा लिने निर्णयले हंगामा, अब बिहे चै कसले गर्छ प्रश्नले घोच्यो !
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री स्वरा भास्कर फेरि चर्चामा आएकी छिन् ।
हरेक विषयमा बोल्ने गरेका कारण उनी कारण बारम्बार चर्चामा रहने गरेकी छिन् ।
बलिउड अभिनेत्री भास्कर फेरि एकपटक चर्चामा आएकी छिन् । हालै उनले आफुले धर्मपुत्र लिन चाहेको खुलासा गरेकी थिइन् ।
जानकारी अनुसार उनले आफ्नो नाम भारतको केन्द्रीय दत्तक (अडप्सन) संसाधन प्राधिकरण (सिएआरए) मा सम्भावित दत्तक अभिभावक (पिएपी) को रूपमा दर्ता गराएकी छिन् । हालै अभिनेत्री भास्करले आफ्नो निर्णय र त्यसको प्रक्रिया बारे खुलेर कुरा गरिन् ।
एक अन्तर्वार्तामा उनले भनिन्, ‘मैले सन्तान अडप्सन गर्ने निर्णय गरेपछि मानिसहरु मसँग बिहे कसले गर्छ भन्ने चिन्तामा छन्, यो यस चरणको प्रारम्भिक भाग हो, किनभने यसको प्रक्रिया धेरै लामो छ ।
त्यसका लागि लामो समय कुर्नु पर्ने हुन्छ ।’ उनले थपिन्, ‘मलाई लाग्छ कि यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि राज्य र सिएआरएले बच्चालाई सुम्पने अभिभावकले उनको हेरचाह गर्ने कि नगर्ने भनेर धेरै सावधानीपूर्वक निर्णय गर्दछ ।’
यस क्रममा स्वराले बच्चा अडप्सन गर्ने निर्णय गरेदेखि नै मानिसहरुले उनलाई अनौठो प्रश्न सोध्ने गरेको बताइन् । उनले भनेकी छिन, ‘मानिसहरुले सोधिरहेका छन् कि अब तिमी बिहे गर्दिनौ, तिमीसँग कसले बिहे गर्छ ।
तर मेरा आमाबुवा, भाइ, भाउजु र नजिकका साथीहरूले मेरो निर्णयलाई सम्मान र समर्थन गर्छन्, जुन मेरो लागि पर्याप्त छ ।’ यसअघि रविना टण्डन र सुस्मिता सेनले पनि अविवाहित रहँदा सन्तान अडप्ट गरेका छन् ।
उनले भनिन्, ‘मलाई थाहा छ एकल आमा हुनु ठूलो कदम हो ।’ उनले बच्चा अडप्ट गर्ने खबर सार्वजनिक हुनेबित्तिकै उनको तुलना अभिनेत्री सुस्मिता सेन र रविना टण्डनसँग हुन थाल्यो ।
कामको कुरा गर्दा स्वरा भास्कर अन्तिम पटक रसभरी, भाग ब्यानी भाग सहित धेरै ओटीटी श्रृंखलाहरूमा देखिएकी थिइन् । हाल उनी आफ्नो आगामी रहस्य मिमांसामा फेरि एकपटक अनुसन्धान अधिकृतको भूमिकामा देखिने भएकी छिन् ।